Apple Inozivisa 2016 WWDC Scholarship Vanokunda | IPhone nhau
Apple Inotanga Kuzivisa 2016 WWDC Scholarship Vanokunda
Anenge maawa makumi maviri nemana apfuura, Apple yatanga zivisai WWDC vadzidzi vanokunda yegore rino. Vazhinji vevakakunda vakaburitsa nhau paTwitter vachivimbisa kuti vakatogashira izwi reApple, avo vakavapa iwo kudzidza uye vakavakoka kumusangano uchaitika mukati memwedzi chete.
Vatori vechikamu vemakwikwi vaifanirwa kupa chikumbiro chakaratidza «kushandiswa kwekugadzira kweApple matekinoroji«Zvakare pamwe nekudzidzira kweyekunyora kwavo kodhi, chimwe chinhu icho, chokwadi, chinokwezva kuda kuziva kwangu uye ini ndoda kuona. Pakazara, iyo kambani iyo Tim Cook inomhanya ichapa 350 yeaya masomo kune vadzidzi uye nhengo dze nhengo y 125 kune vanogadzira vane mashoma emari.
Apple Inozivisa WWDC Scholarship Vanokunda
Musangano wegore rino Wepasi Pose Mushanduri uchaitwa kubva munaJune 13 kusvika 17 kuMosconone West muSan Francisco. Vapindi vachawana mukana weinopfuura chiuru chiinjiniya cheApple uye anopfuura ma1.000 marabhu uye zviitiko. Kukosha kweaya masifundi kunonzwisiswa zvirinani kana isu tikadzidza nezvemutengo weyakajairwa WWDC matikiti anokwana $ 150 (€ 1.599), mutengo usingasanganisi mafambiro uye pekugara mari.
IWWDC yanga ichiwana mukurumbira mumakore apfuura, izvo zvine chekuita zvakanyanya neiyo iPhone nehurongwa hwekushandisa, ndosaka Apple yaifanirwa kuita mhando iyi yekupa. Muna 2008 vakaunza iyo App Store, Apple's mobile application chitoro, muna 2007 isu taigona kuona iyo iOS makeover uye muna 2014 taigona kuona iwo majeti uye mamwe mabhatibhodi ayo vamwe vashandisi anofarira zvakanyanya. Gore rino vanotarisirwa kuunza iOS 10, OS X 10.12, watchOS 3 uye tvOS 10. Zvishoma zvatinogona kuziva nezve masystem nyowani, asi runyerekupe runoti Apple Music ichave neyekusimudza chiso izvo zvinosanganisira dhizaini nyowani uye, izvo zvandinotarisira zvimwe, mazwi enziyo. Chii chaunotarisira kuti vanounza paWWDC 2016?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple Inotanga Kuzivisa 2016 WWDC Scholarship Vanokunda
Viv ichave iyo Siri inofanira kunge iri parizvino (Pfungwa)
Apple Pay inokura muCanada, mabhanga matsva uye mamwe makadhi